Manchester United oo bareejo ku gashay garoonkeeda Old Trafford - Halbeeg News
Manchester United oo bareejo ku gashay garoonkeeda Old Trafford
in Ciyaaraha, Soomaaliya
Manchester United ayaa bareejo lama filaan ah kala kulantay kooxda Wolves oo marti u ahayd.
Kooxda martida ah ee Wolverhanton Wanderers ayaa qaab dar dar leh ku bilaabatay kaddib markii ay sameeyeen fursado dhawr ah oo ay ku halis galiyeen shabaqa uu waardiyaha ka yahay David De Gea.
United ayaa markeeda weerarka qaaday waxaana ay noqotay kooxda nasiibka u yeelatay goolka furitaanka, Fred oo suuqii xagaaga kooxda kusoo biiray ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay kaddib gool caawin cajiib ah oo uu ka helay Paul Pogba.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-0 ay hoggaanka ciyaarta ku hayso Man United sidoo kalena ay ahayd kooxda inta ugu badan kubadda maamulaysay qeybtaas.
Qeybtii dambe ee ciyaarta ayaa noqotey mid ay ciyaarto sidii hore kasii adkaatay waxaana markan qaab xoogan kusoo gashay kooxda Wolves oo u muuqday kuwo dar-daaran kama dambeys ah soo qaatay.
Kooxda martida ah ee Wolves ayaa dhalisay goolka bareejaha, Goolkan ayaa ahaa mid uu dedaal badan soo galiyay Raul Jiminez oo caawinta goolkan lahaa, Xiddiga waayo araga ah ee Joao Moutinho ayaa goolka bareejaha si habsami leh ugu hubsaday shabaqa Red Devils.
Intaa kaddib, Man United iyo Wolves ayaa isku dayo dhawr ah sameeyay balse labada kooxoodba waxa ay ku fashilmeen inay shabaqa gaadhaan, Traore uu kulankan bedel ku yimid ayaa ku dhawaaday inuu guuldaro bado United balse De Gea ayaa ka diiday halka daafaca birta ah ee Wolves ay weeraradii Man United xakameeyeen.
Ra'iisul wasaare Kheyre oo la kulmay danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya
Madaxwaynaha Deegaanka Soomaalida oo booqday Xabsiga Jeel Ogaadeen